Wadaagista faylasha ballaaran oo u dhexeeyay qalabka Android internetka baabbi'in doonaa xogta aad bil kasta loo qoondeeyay mobile. Iyadoo Bluetooth waa ka duwan oo weyn files yar, inuu weligiisba qaadan doonaan haddii aad rabto in lagu wareejiyo files waaweyn. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxaa jira wax badan oo Chine heli karaa si ay uga caawiyaan la kala iibsiga file wireless Android inay Android.
10. WiFi Fallaadha gan,
Pushbullet (4.6 / 5 stars)
Waxaa loo tixgeliyaa sida mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee isku xira kumbiyuutarada qalabka Android. Ilaa iyo inta PC iyo qalab Android labadaba waa online oo saxiixay akoonka la mid ah isku mar, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan faylasha aad. Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa li_x_nk URL ka qalab Android aad iyo paste aad kombuutarka, aad u hesho wargelinta qalab Android ee, diro loona helo fariimaha qoraalka ah iwm
Faa'iido: interface nadiif ah, kala iibsiga degdeg ah.
AirDroid (4.5 / 5 stars)
Waa mid ka mid ah app ugu fiican si ay u helaan qalab Android aad ka PC. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan oo ay helaan files u dhexeeya qalabka Android aad si aad PC, qeybsanaan ku network kasta. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad u soo dirto oo aad hesho farriimo qoraal ah, aad u hesho wargelinta, iyo sidoo kale helitaanka helaan in ay barnaamijyadooda kale sida WhatsApp, WeChat, Instagram iwm Xitaa markii shaashadda qalab Android uusan shaqeyneynin, weli waxa aad aad samayn karto si caadi ah samayn lahaa ku saabsan telefoonka adigoo isticmaalaya browser internetka.
Faa'iido: free, kala iibsiga si degdeg ah, si ay u helaan awood aad telefoon fog.
Qasaarooyinka: kuma wareejin karaan faylasha badan, drainer batteriga.
Tababare File Explorer File ES (4.5 / 5 stars)
Kala iibsiga wireless Android waxaa loo sameeyey si fudud la app this. Waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan laba qalab si router la mid ah. Marka la xidhiidha in la gaaray, app awood u yeelan doonaan in la ogaado qalabka in aad rabto in la dhiso li_x_nk kala iibsiga ah ka hor inta kuu soo diri files u dhexeeya qalabka Android iyo PC. Waxa kale oo aad maamuli kartaa faylasha aad wax ku ool ah oo la app this.
Faa'iido: free, fududahay in la isticmaalo, .zip taageero iyo files .raw, taageertaa luqado kala duwan.
Qasaarooyinka: badhanka overwrite waxaa ku sugnaa halkaas oo waa ay fududahay in si qalad ah guji ku yaal.
ShareIt (4.4 / 5 stars)
Waxa kale oo caan ah oo Android wireless app kala iibsiga file waa SHAREit. Marka qalabka ku xiran yihiin midba midka kale, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan files in ay diyaar u yihiin iibsiga. Habkan, aqbalana uun ka heli kartaa files in ay doonayaan oo aan dhibtaada diraha. Iyada oo ah xadka kala iibsiga sare ee 20Mbps, waa mid ka mid ah barnaamijyadooda kala iibsiga ugu dhaqsiyaha badan laga heli karaa Google Play. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa in aad nuqulka macluumaadka kala duwan ee ka qalab diraha ee la feature CLONEit ah.
Faa'iido: Ma u baahan tahay in ay la mid network, kala iibsiga file cross-madal, si degdeg ah.
Qasaarooyinka: aqbalana leeyihiin karaa xuquuqda xor ah oo uu ku soo gudbiyo / iyadu qaadi karto.
SuperBeam (4.3 / 5 stars)
Iyadoo app this, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u sameeyaan Android kala iibsiga wireless in Android via xiriir WiFi. Haddii aad ka walwalsan tahay faylasha aad ku dhacaan qalab qaldan, uma baahnid in aad walwasho - waxaad u baahan doontaa si xubnuhu laba qalabka la isticmaalayo code ah QR, NFC ama buugga la wadaago ee muhiimka ah. Haddii aad ku jirtid version Pro, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u astaysto folder Ahaado.
Pro: fududahay in la isticmaalo, kala iibsiga degdeg ah, awoodi doonaa inay xawilaan files kala duwan, taageeraan kala duwan oo nooc file.
Qasaarooyinka: joogta ah shil.
Nidaameed (4.3 / 5 stars)
Soo diyaariyay BitTorrent, nidaameed waa app ah waa wakhti weyn, waayo, kuwa daneeya ammaanka. Mulkin Waxaad kartaa in files yihiin ammaan marka aad samaynayso Android inay Android kala iibsiga file wireless sababtoo ah app uusan isticmaali technology kasta oo daruur. Iyadoo app this, waxaad awoodi doontaa in aad u aragto fayl kala duwan iyo files si aad muuqaal ahaan u arki karaan wixii aad rabto in lagu wareejiyo.
Faa'iido: free, fudud si ay u isticmaalaan, laba jeer sida ugu dhakhsaha badan ay tartan.
Qasaarooyinka: hagaagsan ma si sax ah u shaqeeyaan.
CShare (4.3 / 5 stars)
Mid ka mid ah Android cusub si ay Android wireless app kala iibsiga file on Google Play. Waa awoodaan si ay u gudbiyaan files kala duwan ee ka Chine in ay kulan, ka PDF files si sawirro. Waa 30 jeer ka dhakhsi badan Bluetooth taas oo ku haboon si ay u gudbiyaan files waaweyn. App waa weyn yahay ee lagu ogaan karo qalabka kale ee isticmaala app la mid ah, si aad u ogaato qofka aad la wadaagi kartaa files. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay la wadaagaan files leh dad badan oo leh hal click.
Faa'iido: dhakhso ah, awoodi doonaa inay xawilaan files kala duwan, howlgalka hal click, koox taageero la wadaago.
Qasaarooyinka: waxaa laga yaabaa in aan ka shaqeeyaan qalabka Android qaarkood.
Xender (4.3 / 5 stars)
Kala iibsiga app ayaa 4-6 Mb xogta halkii labaad mar qalabka waxaa li_x_nked badan WiFi toos ah. Waxaad awoodi doontaa inaad u soo dirto files kala duwan si ay u qalab badan - oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa la abuuro koox ka mid ah wax ka badan 4 qalabka. Waxaad sidoo kale ku wareejin karo files u dhexeeya nidaamyada hawlgalka badan.
Faa'iido: free, fududahay in la isticmaalo, waxa ay taageertaa noocyo kala duwan oo files, taageertaa dhufto ee kala duwan, kala iibsiga aad u degdeg ah.
Qasaarooyinka: ha aad doorato folder kala iibsiga Ahaado.
WiFiShare (4/5 stars)
Waxaa jira laba nooc u app this - WiFiShare (socon on dhammaan qalabka socda ee Android 2.3 iyo wixii ka sareeya) oo WiFiShare Macmiilka (socon on dhammaan qalabka socda ee Android 1.6 iyo wixii ka sareeya). Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan isticmaalaya WiFi Direct ama network kasta oo WiFi u dhexeeya qalabka kala duwan Android. Faylal ay wareejiyo degdeg ah 1.4-2.5 Mbps.
Faa'iido: free, fududahay in la isticmaalo, waxa ay taageertaa badan oo kala duwan versions OS Android.
Qasaarooyinka: ma shaqeeyaan qalabka Android qaarkood.
Gan WiFi! (3.7 / 5 stars)
Mid ka mid ah suuqa kala iibsiga file wireless app ugu horreeya ee Android horumariyo. App Tani waa weyn haddii aad rabto in aad wax kaliya wareejin karaan faylasha iyo wax kale oo kaliya - weyn noqon lahaa haddii aad isticmaasho qalabka Android aad ah loola sababtoo ah waa mid aad u fudud. Waxaa la socon kara version hoose ee Android, taas oo weyn haddii aad ka fekereyso inaad casriyeeyo qalab cusub Android.
Faa'iido: dhakhso ah, sharraxaad la'aantu.
Qasaarooyinka: ma la jaan qaada qaar ka mid ah qalabka Android.
Sida aad arki karto, waxaa jira dad badan barnaamijyadooda la heli karo si uu kaaga caawiyo wareejinta file wireless. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ka heli mid adiga kuu fiican iyo kuwa ugu socon kara qalab Android aad.
> Resource > Transfer > Top 10 Android Apps si ay u gudbiyaan Android Files wirelessly